Dayactirka Marsh ee Louisiana kadib BP Spill Led waxaa sameeyay Ellicott Dredges
Abuurista Harooyinka Harooyinka Harooyinka - NRDA Soocelinta Hore ee Mashruuca wuxuu ku lug leeyahay abuurista marsh ka dhex dhaca mashruuc loogu magac daray "Mashruuca Abuurista Harooyinka Harooyinka" ee loo sameeyay laguna maalgeliyey Qorshaha Xeebaha Xeebta Xeebta, Ilaalinta iyo Soo Celinta Sharciga (CWPPRA). Mashruucan wuxuu badalayaa ku dhawaad ​​104 acres oo ah xirmooyin jajab ah oo loo sameeyay qiyaastii 5-6 acres terraces oo haddii kale laga dhisi lahaa xadka mashruuca CWPPRA.
Hal abuurka Harada Hermitage Marsh - Mashruuca Soo celinta Hore ee NRDA wuxuu abuuri doonaa ku dhawaad ​​104 acres oo xashiish ah bedelkeedana ah xargaha qadka toosan ee 7,300 ee weelkii dhoolashada ahaa ee lagu soo daray naqshada kama dambaysta ah ee mashruuca saldhiga CWPPRA. Aaggan dheeri ah ee dhexda ah waxaa laga dhisi doonaa gabi ahaanba xadka dhismaha mashruuca CWPPRA. Sediment-ka ayaa si habsami leh looga soo goyn doonaa deynta aagga wabiga Mississippi, waxaana lagu ridi doonaa dhuun si loo abuuro ciir cusub oo aagga mashruuca ah. Waqti dheeri, Biyo-yaraanta dabiiciga ah iyo isku-darka maandooriyaasha qashin-qubka ah waa inay keenaan sare u qaad ku dhex jira kala-goysyada u horseedi kara abuuritaanka xasilloonida degdegga ah. Aagga Xilliga '104-acre' waxaa lagu dhex beerayaa dhir hooyo si loo dardargeliyo faa'iidooyinka laga helayo mashruucan.
Hal abuurka Harada Hermitage Marsh Lake - NRDA Mashruuca Soo celinta Hore wuxuu ku yaalaa gudaha Barataria Hydrologic Basin ee Plaquemines Parish, Louisiana, dhanka galbeed ee bulshada Pointe a la Hache, iyo waqooyi-galbeed ee bulshada Magnolia. Tartankan ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ahmiyada koowaad u leh dib-u-soo-celinta xeebaha, wuxuuna ahaa diirada lagu saarayay daraasad ballaaran iyo qaabeynta mashruuca iyo hirgelinta.